Izilimi zaseYurophu akufanele zibonwe njengezidayimane eziboniswa ngaphansi kwebhola leglasi elizosikhanyisa ngobuhlakani bazo ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Februwari 18, 2018 04: 18 2 Amazwana
Ukufunda olunye ulimi akuhilelanga nje ukufunda amanye amagama ukubhekisela ezintweni ezifanayo, kodwa nokufunda enye indlela yokucabanga ngalezo zinto.
Ngu-Sheikh anta Diop & Flora Lewis
I-Togo: umsebenzi wezinkumbulo ezimangalisayo, kodwa kuyiqiniso ... Abasebenzi bezempi bangaba kanjani amasosha nemishini eminingi yokulwa nabasosha beTogolese ngezandla?
1 Izintambo zamazwana
1 Izimpendulo zemibuzo
2 Abalobi be-Comment
esisha endala iningi livotelwe
Kumele sigcine isimo esihle sokoloni oluzosiza abantu abaningi ukuba bafunde izilimi ezivamile, futhi bayeke ukuphambanisa ngaso sonke isikhathi.
Vote Up0Vote phansi Phendula
18 / 02 / 2018 15 h 12 min
UNicolas, usho ukuthini ngokugcina okuhle? Ayikho into enhle yokukoloni. Laba bantu banobubi bonke
21 / 02 / 2018 9 h 21 min